Mitondra Hafatra Lehibe Ireo Saribakoly Kely Avy Amin’ny Fonja Vietnamiana Iray · Global Voices teny Malagasy
Mitondra Hafatra Lehibe Ireo Saribakoly Kely Avy Amin'ny Fonja Vietnamiana Iray
Voadika ny 01 Janoary 2017 12:24 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, عربي, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Saribakoly Roly poly
Ity lahatsoratra nosoratan'i Quyên Ngô ity dia avy amin'ny Loan, tranonkalam-baovao iray tsy miankina ary rakipeo izay manely tantara mikasika an'i Vietnam. Naverin'i Global Voices nozaraina ao anatina fifanarahana-fifampizarana votoaty izany.
Efa nahita saribakoly roly poly ve ianao? Antsoina ihany koa hoe saribakoly mpanao tsingeringerina, na saribakolin-dehilahy mangovitra. Manana loha boribory izy ireo , ambany boribory ary tsy manana tànana aman-tongotra. Rehefa atosikao ilay saribakoly, mihovitra kely fotsiny izy fa tsy mianjera izany mihitsy.
Misy dika nataon'ireo foko vitsy an'isa ao Vietnam — maro loko ary vita amin'ny bà. Ary ankehitriny misy dika hafa, izay gadra politika iray no nanao azy manokana : Nguyen Đang Minh Man.
Vehivavy 31 taona mpanao gazety mpaka sary ary mpikojakoja ny hatsarana izay miditra ankehitriny amin'ny fahadimy taonan'ny nigadràny i Nguyen Đang Minh Man. Voaheloka higadra valo taona noho ny fiampangana amin'ny fanakorontanana izy. Ny reniny, Đặng Ngọc Minh, dia efa gadra noho ny fiheverana koa taloha, izay nosamborina tamin'ny fotoana nisamborana ny zanany vavy, fa navotsotra mialoha lavitra.
Mampahatsiaro ny fotoana izay nianarany ny fanaovana saribakoly niaraka tamin’ i Minh Mẫn tany am-piandrasana fitsarana i Ngọc Minh.
Nentina tao Nghệ An izahay, tao amin'ny toby Nghi Kim. Nisy karazana foko vitsivitsy tao, ary ry zareo no manao ireny saribakoly ireny, fa tena ratsy anie izany! Saingy nasehon'izy ireo taminay ny fomba fanaovana azy.
Miavaka daholo ny saribakoly tsirairay ary manao akanjo samihafa. Mitovy habe amin'ny felatananao izany, miaraka amina antsipirihany manaitra toy ny volomaso ary lolo kely sy voninkazo nozairina eo amin'ny satrony. Ny saribakoly iray manao satroka izay mitsimbadika kely amin'ny lamaody kasikasy. Ny iray hafa kosa dia tena manaraka fety tsara — voaravaka mena sy maitso, nofatorana kofehy mena mitondra ny teny hoe ”Krismasy Sambatra” ireo randrany roa milatsaka manerana ilay vatana keliny.
Fa ny kanto sy ny asatanana dia lasa mpampita hevitra miafina rehefa voatazona ao am-ponja ianao. Miresaka mikasika ny fomba fanangonana ireo fitaovana ampiasaina mba hanamboarana ireo saribakoly i Ngọc Minh:
Ny marina dia, rehefa nianatra ny fomba fanaovana azy ireny izahay, tao amina toby iray fitazonana izahay, noho izany tsy tena nanana fitaovana loatra. Rehefa te hanazatra ny tenanay amin'ny fanaovana azy ireny izahay dia nila nampiasa ny kofehy avy amin'ny servieta fisasana. Tsy tena tsara bika loatra anefa izany, rehefa manaisotra ireo kofehy ireo ianao. Fa raha nafindra toerana tany amina toby fitazonana iray hafa izahay, nisy gadra maro izay miasa amin'ny fanaovana peta-kofehy tao, ary nomen-dry zareo ho anay ny ambinà kofehiny tavela – samihafa loko daholo. Ary nahita landihazo koa izahay, noho izany nofenoinay ny kibon'izy ireny.
Tafiditry ny fitroaran'ny fanaovana saribakoly i Minh Mẫn. Nanamboatra iray ho an'ny fotoana tsirairay izy – iray ho an'ny Krismasy, iray ho an'ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'ny reniny, iray ho an'ny tsingerintaona nivadian'ny ray aman-dreniny.
Tao am-ponja izay nitazonana an'i Minh Mẫn sy ny reniny, dia tazonina amina hefitra samy hafa daholo ary tena voasakana amin'ny fivoahana ivelan'ny efitra ireo mpiara-mifonja. Tena voafehy ny fitaovana famakiana boky na taratasy ary mety ho atokana efitra ny gadra iray noho ny fitondrantena tsy mendrika voatsikaritra. Lasa loharanom-pitsaboana misy fahaizana mamorona no sady fialamboly ireo saribakoly roly poly.
Raha efa teo an-dalam-pamotsorana ny reniny, nandroso fehezana ho azy mba hoentiny mody i Minh Mẫn. Niahiahy ireo mpiambina ny trano figadrana ary nangataka ny hanapahana ireo saribakoly mba ahazoana antoka fa tsy tetika mba hamoahana an-tsokosoko zavatra avy ao amin'ny figadrana ireo saribakoly. Na izany aza, tsy nahita na inona na inona tao anatin'ny kibon'ireo saribakoly izy ireo ankoatra ny landihazo. Ny zavatra tsy voamariky ny manampahefana dia ireo hafatra entin'ireo saribakoly eo anoloan'ny tarehiny avy hatrany — tsy afaka ny hanakatra izany fotsiny izy ireo.
Milaza amin'ny Loa ny hafatra ‘miafina’ ao anatin'ireo saribakoly i Ngọc Minh:
Ny iray mitondra ny sainam-pirenen'ny Repoblikan'i Vietnam ary nataony peta-kofehy ny anarako amin'ny teny Anglisy, Ammy teo amin'izany, miaraka amin'ny tsingerintaona nahaterahako, 4 Aprily, eo akaikin'ny teny Fahafahana, ilay voninkazo fotsy, ary lolo kely mahafinaritra eo amin'ny satroko.
Ilay voninkazo fotsy, hoa mai, izay hita amin'ny maro amin'ireo saribakoly roly poly nataon'i Minh Mẫn dia maneho ny marika famantarana ilay antoko mpandala ny demokrasia Việt Tân, ary ampiasaina ho toy ny hafatra fanehoana firaisankina amin'ireo miady miaraka aminy any anatin'ny rindrin'ny fonja. Mpikambana toy ny reniny i Minh Mẫn.
Sasany amin'ireo saribakoly
Saribakoly iray no manao akanjo mainty, miaraka amin'ny litera T sy ny tarehimarika 4 natao peta-kofehy eo amin'ny vatany: midika hoe ”tháng” ilay T, na koa volana, ary ny 4 dia midika volana Aprily. Ity saribakoly ity, hoy i Ngọc Minh, dia mankalaza ny fahatsiarovana ny tháng tư đen, Aprily Mainty – raha tsy izany dia fantatra toy ny 30 Aprily na ny fianjeran'ny Sàigon. Taorian'ny ady, nanandrana saingy tsy nahavita ny nandositra avy tao Vietnam ilay fianakaviana.
Naniry ny hizara ireo famokarana mahafinaritra sy feno hafatra nataon-janany amin'izao tontolo izao i Ngọc Minh, noho izany taorian'ny namotsorana azy, nizara sarin'izy ireo tamin'ny Facebook izy. Nanomboka naneho hevitra ireo olona manerana izao tontolo izao ary nahatsikaritra ireo saribakoly. Izany dia rehefa noraràn'ny manampahefana i Ngọc Minh sy ny vadiny tsy hitondra saribakoly misimisy kokoa hody any an-trano taorian'ireo fitsidihana tany am-ponja.
Fa tsy izany irery ihany no fotoana nahazoan'i Minh Mẫn ny fifantohan-tsaina erantany. Efatra volana lasa izay, tamin'ny Septambra, nilaza ny Vondrona ao amin'ny Firenena Mikambana Miasa ho An'ny Fitazonana Fahatany fa ”notazonina fotsiny noho ny fampiharany am-pilaminana ny zony ” i Minh Mẫn. Niantso ho an'ny famotsorana azy avy hatrany ry zareo.
Ary raha mbola any ambadiky ny vavahady vy ao amin'ny Toby Fonja 5 ao Thanh Hóa i Minh Mẫn, mandritra ny fitsidiham-pianakaviany tamin'ny Novambra, nilaza i Ngọc Minh fa nahatsikaritra fiovana kely teo anivon'ireo manampahefana ry zareo. Mitantara i Ngọc Minh:
Niresaka tamin'ny finday teo amin'ny fitaratra manasaraka azy ireo izy sy ny rainy. Niteny azy ny rainy hoe ‘niteny ny Governemanta Vietnamiana ny Firenena Mikambana mba hamotsotra anao tsy misy fepetra. Avelako ho fantatrao izany, saingy aza maika ny hanangom-panantenana be loatra, satria hatramin'ny faran'ny andro dia mbola an'ny Firenena ihany no manapaka izany. Mitabataba ho an'ny fahafahanao ireo fikambanana sy vahoaka manerana izao tontolo izao.’ Taloha, na oviana na oviana izahay miresaka mikasika ny olana mifandray amin'ny raharaha, dia nosakanany avy hatrany izahay. Fa amin'ity indray mitoraka ity, tsy nanakana anay ry zareo! Nitsangana nijery fotsiny ireo dimy mpiambina gadra, tsy niteny na teny iray aza.
Miteny i Ngọc Minh fa izy sy ny fianakaviana dia maniry fotsiny ny fiverenan'i Minh Mẫn any an-trano. Tsy maniry ny hahazoany fialokalofana ara-politika sy hatao sesitany any amina firenena hafa. Miteny izy fa maniry ny hiaraka hiady toy ny fianakaviana tokana ho anà Vietnam afaka, ao Vietnam ry zareo.
Ary raha matahotra hamela ireo saribakoly roly poly sasany hivoaka ny fonja ny manampahefana, azon'ny tsirairay vinavinaina ny fihetseham-pon'izy ireo momba ny famelàna an'i Minh Mẫn halalaka.
Fantaro bebe kokoa ny tantaran'i Minh Mẫn amin'ny fihainona ity rakipeo ity